ldsolar ရဲ့ controller ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုလာထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အာရုံစိုက်သည်။
Ldsola Land Dream pwm solar charge controller အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း
Ldsolampt ထိန်းညှိကိရိယာ TD75V mttp အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူ
Ldsolar MPPT Charge Controller ကို TD100V mppt နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller ကို
OD/TD75V တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်
ldsolar ရဲ့ controller ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို။
ဤဗီဒီယိုတွင်၊ ဘက်ထရီနှင့် ဆိုလာပြားချိတ်ဆက်ရန် ldsolar အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ချိတ်ဆက်နည်းကို သင့်အား ပြသပါမည်။
ယူနစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားမေးခွန်းများအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပံ့ပိုးကူညီမှု ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုကို ပေးပါ။
ယခင်ကဝူဟန် Welead S ကအဖြစ်လူသိများဝူဟန် Welead နယူးစွမ်းအင် Co. , Ltd,&Ltd. , T က Co. , R ကိုပေါင်းစပ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်&: D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု, သာနေရောင်ခြည်နဲ့ controller ထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါစက်ရုံတွင်ဝူဟန်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တိုင်း Off-grid နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အဆင့်မြင့် ldsolar နဲ့ controller ကို install လုပ်ဖို့ကျူးလွန်နေကြသည်။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ် LDSOLAR နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်: မြေအိပ်မက်စီးရီး, Sky အိပ်မက်စီးရီးများနှင့် 10A ထံမှ 60A အာဏာအကွာအဝေးနှင့်အတူသမုဒ္ဒရာအိပ်မက်စီးရီး, ဗို့အား 12V-24V, 48V ဖြင့်ကိုယ်စားပြု 1, PWM နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller စ။ 2, Tracer အိပ်မက်စီးရီးကကိုယ်စားပြု MPPT နေရောင်ခြည်နဲ့ controller, 15A ထံမှ 80A အာဏာအကွာအဝေးနှင့်ဗို့အား 12V-24V-48V ဖြစ်ကြသည်။ တင်သွင်း 32-bit နဲ့ချစ်ပ်များနှင့် Self-ဖွံ့ဖြိုး MPPT algorithm ကိုတစ်မျိုးဆက်သစ်အသုံးပြုခြင်းသည် Controller ကိုထိထိရောကျရော 30% မှ 20% အားဖြင့်ဆိုလာပြားများ၏အသုံးချမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်, ပိုမိုမြင့်မားနမူနာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ပိုမြန်တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ controller စတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဖောက်သည်များအတွက်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ထုတ်ကုန်တင်းကြပ်စွာ, အ ISO9001 ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလိုကျနာနောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ်စံ EN62109 လိုက်နာရန်, အီး, RoHS နှင့် IEC နိုင်ငံတကာအဆင့်မီလက်မှတ်ရယူနှင့် 30 ကျော်အမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်မြင့်မားသောဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအသုံးပြုမှု ldsolar controller ကို၏ 99.9% ကျော်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအာမခံချက်, Build Off-grid နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က!
နေရောင်ခြည်ကို Power Station ကို
အဆိုပါ PWM controller ကို 1.5 နှစ်ပေါင်းအာမခံပေးသည်ကို၎င်း, MPPT controller ကိုတစ်ဦး3နှစ်အာမခံပေးထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်သည့်နေရောင်ခြည်နဲ့ controller အပြည့်အဝပါဝါဖြစ်ကြောင်းကတိပေး။
ကြှနျုပျတို့သညျ "အတုတဦးတည်း, Fine ဟောင်းနွမ်းအစိတ်အပိုင်းများကိုလုံးဝအသုံးကြောင်းကတိပေး100,000RMB "။
လျင်မြန်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ "သုံးခြေလှမ်းအတည်ပြုချက်ကို" ပြီးနောက်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ပေါင်းစပ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ R ကိုအထူးပြုနေကြတယ်&: D, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတာဝန်ခံနဲ့ controller ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်။
လျှပ်ကာ, ldsolar controller ကို၏ reliablility တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝအာမခံချက်မှဒါသကဲ့သို့, ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်မှာတောက်ပအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ် eletronic parts.It ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ဖျံ
ကျနော်တို့ quality.After မျိုးစုံအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ထိန်းချုပ်ဖို့ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပစမ်းသပ်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ်စံ EN62109-1, 62109-2 နှင့် ISO9001 ၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အချမှတ်, အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အရည်အသွေးန်ဆောင်မှုများပေးကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းရုံး၏မြှင့်တင်ရေးအောက်ရှိဇာတိမြေဈေးကွက်ထဲမှာမနိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းအရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များမှု, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, တောင်အမေရိကရဖို့, အာဖရိကနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုအနေဖြင့်ဖောက်သည်များ၏စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Europe.Receiving မသာ